SEO ကျွမ်းကျင်မှုမလိုအပ်ပါ | Martech Zone
အင်္ဂါနေ့, ဇန်နဝါရီလ 20, 2009 သောကြာနေ့, အောက်တိုဘာလ 17, 2014 Douglas Karr
အဲဒီမှာ ... ငါကပြောသည်! အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမှရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ပိုမိုကောင်းမွန်ရန်သုံးစွဲသောငွေအားလုံးကိုတွေ့မြင်ရခြင်းကြောင့်၎င်းသည်ငါပြောခဲ့သည်။ ရှာဖွေရေးယန္တရားပိုမိုကောင်းမွန်ရေးနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်၏အမြင်မှာဤတွင်ပါ။
Search Engine Optimization ၏အများစုသည်အတွင်း၌ကျသည် အကြောင်းအရာကောင်းများရေးသားခြင်း, authoritative ဆွဲဆောင် website ရဲ့ backlink သို့ ထို အရေးကြီးသောအနည်းငယ်သောအကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့်များကိုလိုက်နာခြင်း။ ဤအရာအားလုံးသည်မည်သူမဆိုလိုက်နာနိုင်သောအခြေခံများဖြစ်သော်လည်းအများစုမှာတော့မဟုတ်ချေ။
ခေါင်းစဉ်များ၊ ခေါင်းစဉ်ငယ်များစသည်တို့ကဲ့သို့ရိုးရှင်းသောဒြပ်စင်များကိုအသုံးမပြုနိုင်သောပုံရိပ်လေးလံခြင်းနှင့်စာလုံးထုခြင်းစသည့်စျေးကွက်များသို့ ၀ က်ဘ်ဆိုက်အသစ်များရောက်ရှိနေသည်ကိုကျွန်ုပ်မြင်တွေ့ရဆဲဖြစ်သည်။ ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်တွန့်သွားစေမည့်ရိုးရိုး sitemap ကိုမထားပါ။ ကျွန်ုပ်၏ဘလော့ဂ်တွင်အကြိမ်ကြိမ်ရေးသားခဲ့ပြီးအခြားဘလော့ဂ်များတွင်ထပ်ခါထပ်ခါရေးခဲ့သည့်ဤအကြံပြုချက်များသည်သင်၏ဆိုဒ်၏ ၉၉% ကိုရရှိလိမ့်မည်။
အမှန်မှာ၊ အကယ်၍ သင်သည်မကြာခဏသက်ဆိုင်သောအကြောင်းအရာများကိုမကြာခဏရေးပါကရှာဖွေသူများရှာဖွေသောသော့ချက်စာလုံးများနှင့်စကားစုများပါ ၀ င်ပါကသင်၏ site ကိုတွေ့လိမ့်မည်။ ကြောင်းအကြောင်းအရာများ၏သက်ရောက်မှုလိမ့်မည် ထောင်ပြီး မည်သည့် SEO ကျွမ်းကျင်သူမဆိုအောင်မြင်နိုင်သည်သောပြင်ဆင်ခြင်း။ သင့်ရဲ့ပိုက်ဆံဖြုန်းကိုရပ်တန့်ခြင်းနှင့်အကြောင်းအရာရေးသားခြင်းကိုစတင်!
လူတော်တော်များများကရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်များကို URL length, outbound links, nofollow, etc စသည်တို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးငြင်းခုန်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့်သူတို့က ၁% သာကစားပါတယ်။ သေချာတာပေါ့၊ တချို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက် ၁ ရာခိုင်နှုန်းကဒေါ်လာသန်းနဲ့ချီပြီးကွာခြားနိုင်တယ်။ ဒါပေမယ့်မင်းနဲ့ငါအတွက်တော့ဒါဟာတကယ့်ကိုကြီးမားလွန်းတယ်။
အခြားလုပ်ငန်းတစ်ခုရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ကတော့ ၉၉.၉၉% ကသင့်ပြိုင်ဆိုင်မှုရဲ့သူတို့လုပ်နေတာကိုသဲသဲကွဲကွဲမသိဘူး။ သက်ဆိုင်ပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုရေးပါ။
Tags: အကြောင်းအရာစျေးကွက်ချစ်သူဒါကြောင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြုseo ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲရှာဖွေရေးအတွက်ဘယ်လိုပိုကောင်းအောင်လုပ်မလဲရှာဖွေရေးအင်ဂျင် optimizationseoseo အတိုင်ပင်ခံseo ကျွမ်းကျင်သူ
Facebook အသုံးပြုသူ ၃.၂၄% သေသည်
ဇန်နဝါရီ 20, 2009 မှာ 2: 10 AM
ကောင်းတယ် သင်၏ရှင်းလင်းချက်သည်ကျွမ်းကျင်သူပင်သဘောမတူဟန်ရှိသည်ကိုရှင်းလင်းစွာတွေ့ရသည်။ သင်အလားတူအရေးပါသောအခြားအရာများကိုထပ်မံရှင်းပြမည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။
ဇန်နဝါရီ 20, 2009 မှာ 8: 37 AM
အသားနဲ့အာလူး (ပါဝင်တဲ့အကြောင်းအရာ) ဟာ gravy (SEO optimization) ထက်ပိုပြီးအရေးကြီးတယ်ဆိုတာခင်ဗျားရဲ့သဘောထားနဲ့သဘောတူတယ်။ ဒါပေမယ့် SEO ကိုလုံးဝစိတ်မပူပါနဲ့လို့အကြံပေးလား။
၀ င်ငွေအပေါ်အခြေခံပြီးသော့ချက်စာလုံးကိုရွေးပြီးတော့အနည်းဆုံး X ကြိမ်၊ XX အကြိမ်မစတာစတာတွေလိုဘလော့ဂါတွေဟာသူတို့ရဲ့တင်ပို့ချက်တွေကိုပိုကောင်းအောင်လုပ်သင့်တဲ့အရာတွေရှိတယ်ဆိုတာအင်တာနက်ကိုပတ်ပတ်လည်မှာဖတ်ဖူးတယ်။
သင်လုပ်ရန်လိုနေသေးသည်ဟုခံစားရပါသလား၊ သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းကိုကျော်လွန်ပြီး semantic web တစ်ခုအတွက်ရေးသားခြင်းကိုသာအာရုံစိုက်သင့်သလား။
ဇန်နဝါရီ 20, 2009 မှာ 8: 46 AM
SEO ၏အကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့်များကိုလိုက်နာရန်မှာမဖြစ်မနေလိုအပ်သည်။ ကောင်းမွန်စွာဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသောစာမျက်နှာတစ်ခုရှိခြင်း၊ ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များကိုမည်သည့်နေရာတွင်ရှာဖွေရမည်၊ အရေးကြီးသည်စသည်တို့ကိုဖော်ပြရန် sitemaps ကဲ့သို့သောကိရိယာများကိုအသုံးပြုသော site တစ်ခုရှိသည်။
လူများစွာသည်အထူးသဖြင့် SEO ကျွမ်းကျင်သူများသည် SEO ၏ထူးခြားချက်များကိုငြင်းခုန်ကြပြီးသူတို့၏ဖောက်သည်များအနေဖြင့်ကောင်းမွန်သောပလက်ဖောင်းကိုရှာရန်အကြံပေးရုံသာမဟုတ်ဘဲ၎င်းပေါ်တွင်ရေးပါ။ ကောင်းမွန်သောအကြောင်းအရာစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်သည်လိုအပ်သောအကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့်များကိုထည့်သွင်းပေးလိမ့်မည်၊ သို့မဟုတ်အထောက်အကူပြုမည့်ပလပ်အင်များ / ထပ်ပေါင်းထည့်မှုများရှိသည်။
ဤမျှလောက်သေးငယ်ပြီးအလယ်အလတ်တန်းစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည်ထူးခြားမှုရှိစေမည့်နေရာတွင်အလုပ်လုပ်မည့်အစား ၁% ကိုအချိန်နှင့်ငွေများသုံးစွဲကြသည်။
ဇန်နဝါရီ 20, 2009 မှာ 9: 31 AM
ခရစ်၊ X-times ပုံသေနည်းမရှိဘူး။ ၎င်းသည်၎င်းထက် ပို၍ ရှုပ်ထွေးပြီးအတွေ့အကြုံရှိ SEO များသည်သော့ချက်စကားလုံးကြိမ်နှုန်းကိုလုံးဝလျစ်လျူရှုသော်လည်းသင်၏စာမူများတွင်သော့ချက်စာလုံးများနှင့်မူကွဲများကိုသေချာစွာအသုံးပြုသင့်သည်။
ရေပန်းစားပြီးပစ်မှတ်ထားသောသော့ချက်စာလုံးများကိုရွေးချယ်ခြင်းသည်လည်းမရှိမဖြစ်လိုအပ်သော်လည်း၎င်းသည် SEO ကျွမ်းကျင်သူအစိတ်အပိုင်းမဟုတ်ဘဲ Doug ၏စာမူပေါ်ရှိ“ အကြောင်းအရာ” အပိုင်းသို့ကျရောက်သည်ဟုထင်သည်။ အကယ်၍ SEO သည်သင်၏ဘလော့ဂ်ရေးရာမဟာဗျူဟာ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်လျှင်၊ သော့ချက်စာလုံးရွေးချယ်မှုသည်အလွန်အရေးကြီးသည်
20:2009 pm တွင်ဇန်နဝါရီလ 4, 39
ဂျိမ်းစ်မှန်တယ်။ အဲဒါဟာငါသက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုရေးခြင်းအားဖြင့်ဆိုလိုတာပါ။ ဤအရာကိုပြီးမြောက်ရန်ကျွမ်းကျင်သူတစ် ဦး မလိုအပ်ပါ။
ဇန်နဝါရီ 20, 2009 မှာ 9: 28 AM
SEO ကျွမ်းကျင်သူတစ်ယောက်အနေနဲ့ဒီမှာကျွန်တော်မှတ်ချက်တွေပေးရမယ်။ ဂူဂဲလ်တွင်“ widget” ကိုသင်ယခုရှာလျှင်ရလဒ် ၁၂၈၀၀၀,၀၀၀ ရှိသည်။
ပထမစာမျက်နှာတွင် ၁၀ ခုသာပြသပြီး ၁ ခုသာထိပ်ဆုံးတွင်ရှိသည်။ ၁၀ သည်ရလဒ်များ၏ ၁% အောက်သာဖြစ်သည်။
၎င်းသည်အလွန်အစွမ်းထက်သောဥပမာဖြစ်သော်လည်းငါသည် Doug ၏ရာထူးကိုသဘောတူသော်လည်းပြိုင်ဆိုင်မှုရှိသောစက်မှုလုပ်ငန်းများတွင် Doug ရှောင်ရှားခြင်း ၁% သည်ထိပ်ဆုံးနေရာသို့မဟုတ်စာမျက်နှာသုံးမျက်နှာအကြားခြားနားချက်ကိုမကြာခဏဖြစ်နိုင်သည်ကိုသတိရပါ။ ပြီးတော့ Doug ရဲ့ဂုဏ်တင်မှုအရသူဟာတစ်ခါတစ်ရံမှာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောတယ်၊ ငါဟာ SEO SEO ညီအစ်ကိုတွေအတွက်ဟာသအတွင်း၊
Content နှင့် backlink များသည် SEO ၏အခြေခံဖြစ်သည်။ သင်သည်သူတို့၏ထိရောက်မှုကိုအမြင့်ဆုံးအထိမရောက်မချင်းသူတို့ကိုအာရုံစိုက်ပါ။
ဇန်နဝါရီ 20, 2009 မှာ 10: 01 AM
ဤစာရေးသားခြင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ကျွမ်းကျင်သူဥက္ကchair္ဌမှစကားပြောနေစဉ်“ ကျွမ်းကျင်သူမလိုအပ်ပါ” ဟုပြောရန်လုံလောက်သောပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိသောစက်မှုလုပ်ငန်းကိုတွေ့ရလျှင်အလွန်ဝမ်းသာပါသည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ အဲဒါခက်ခဲတဲ့အလုပ်ပဲ၊
ဇန်နဝါရီ 20, 2009 မှာ 10: 15 AM
သင်၏အဓိကပြောဆိုချက်များနှင့်ကျွန်ုပ်သဘောမတူပါ။ ကျွန်ုပ်သည် SEO တွင်အလုပ်လုပ်ပြီး၎င်းသည်ကျွန်ုပ်နှစ်သက်သောအလုပ်ဖြစ်သည်။ SEO ဆိုသည်မှာလျစ်လျူရှု။ မရသောဝဘ်ဖွံ့ဖြိုးမှု၏အရေးကြီးသောကဏ္ aspect တစ်ခုဖြစ်သည်။ ပြproblemနာမှာမကြာခဏဆိုသလို၎င်းကိုလျစ်လျူရှုသောဒီဇိုင်းနှင့်အကောင်အထည်ဖော်မှုအားနည်းခြင်းတို့ကြောင့်လျစ်လျူရှုခြင်းခံရသည်။
ဤနည်းကိုကြည့်ပါ။ ကုမ္ပဏီများသည် SEO အကြောင်းမစဉ်းစားလိုကြပါ။ သူတို့ကအခြားတစ်ယောက်ယောက်ကိုဒီအကြောင်းကိုစဉ်းစားပြီးသူတို့လုပ်နေတာသေချာအောင်လုပ်ပေးလိမ့်မယ်။ သူတို့ကဒီဇိုင်းကိုစဉ်းစားရန်အတွက်တစ်စုံတစ်ယောက်အားပေးဆပ်လိုကြသည်။ အဓိကပြproblemနာကဒီဇိုင်နာအများစုသည် SEO ကိုမစဉ်းစားကြသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
Compendium ၏ဘလော့ဂ်ပလက်ဖောင်းအတွက်တစ်စုံတစ် ဦး အနေဖြင့်လည်းလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်နိုင်သောနည်းလမ်းများစွာရှိလျှင်ဘာကြောင့်ပိုက်ဆံပေးမည်နည်း။ WordPress ကိုကိုယ်ပိုင် host လုပ်ထားသော server ပေါ်တွင်လွှင့်ထုတ်ပြီးဘလော့ဂ်စတင်ရန်မလွယ်ကူပါ။ သို့သော်လူတွေကသင့်ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုအတွက်သင့်ကိုပေးချေသည်။ SEO ကုမ္ပဏီနှင့်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသောအခါသူတို့ကုမ္ပဏီများကငွေပေးရသည်။
SEO ဆိုတာတော်တော်များများရှိတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ငြင်းလို့မရပါဘူး၊ ဒါပေမယ့်တကယ်တမ်းကျတော့ဒီနေရာမှာဘာမှမသိရပါဘူး။ ဒီကိစ္စကတကယ်တော့ငါ SEO ဆိုတာကိုသိပြီးဖောက်သည်တွေအတွက်အကောင်းဆုံးလုပ်ပေးနိုင်တာပါ။
ထို့ကြောင့် SEO များကိုလေ့လာရန်ကုမ္ပဏီများသည် SEO ကျွမ်းကျင်သူများလိုအပ်သည်။
20:2009 pm တွင်ဇန်နဝါရီလ 4, 43
Jonathan - မင်းဒီမှာအမှုဆောင်နေတယ်ထင်တယ်။ တစ်စုံတစ် ဦး ကသူတို့၏ဘလော့ဂ်ကို Compendium ကဲ့သို့သောပလက်ဖောင်းပေါ်တွင်တင်လိုခြင်းမှာအကြောင်းအရင်းမှာ SEO အားစိုးရိမ်စရာမလိုပါ။
ထိပ်တန်း ၄ အတွက်စစ်ပွဲဆင်နွှဲနေသည့်ကုမ္ပဏီအချို့ရှိကြောင်းကျွန်ုပ်ယုံကြည်သည်။ ၁% (သို့မဟုတ်ထိုထက်နည်းသော) ကုမ္ပဏီများသည်သူတို့ကို SEO ကူညီရန် SEO ကျွမ်းကျင်သူများနှင့်ဆက်သွယ်သင့်သည်ဟုကျွန်ုပ်ဖော်ပြသည်။
ကျွန်ုပ်၏ပို့စ်မှာပျမ်းမျှကုမ္ပဏီအကြောင်းဖြစ်သည်။ သူတို့အများစုသည် SEO အကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့်ကိုအသုံးချခြင်း၊ သက်ဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများကိုရေးခြင်း၊ ၎င်းသည်ကျွမ်းကျင်သူမလိုအပ်ပါ။
20:2009 pm တွင်ဇန်နဝါရီလ 4, 34
သငျသညျရှာဖွေရေးအင်ဂျင် optimization ထံအပ်နှံ 100% မဟုတ်လျှင်သင် SEO ငှားရမ်းရန်လိုအပ်ပါဘူး။ ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်သင့်မြတ်မှုသီအိုရီသည်ရိုးရှင်းသော်လည်း၊ ၀ က်ဘ်ဆိုက်တစ်ခု၏အဆင့်သတ်မှတ်ချက်သည်အလုပ်နှင့်ဗဟုသုတများစွာလိုအပ်သည်။
20:2009 pm တွင်ဇန်နဝါရီလ 10, 19
ကောင်းတဲ့ပို့စ်! မင်းဘလော့ဂ်ကိုမင်းဖတ်ပြီးပြီနော်။ မင်းကမင်းကိုကောင်းကောင်းပြန်လာနိုင်မယ်ဆိုတာသိဖို့ဒီနေရာကိုသွားပါ။
မင်းဟာဗဟုသုတကျိန်စာကိုခံစားနေရပြီလို့မင်းထင်တယ်။ ဗဟုသုတကျိန်စာဟာနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာလူတွေအတွက်အလွန်အသုံးများပါတယ်။ ငါလည်းဒုက္ခရောက်နေပြီးအစမှာသူတို့ဘာမှမသိတဲ့အရာတစ်ခုကိုမေ့သွားတဲ့အခါမှာဖြစ်လာတယ်
အသေးစားစီးပွားရေး ၀ က်ဘ်ဆိုက်များရှိသူများသည်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များတွင်ကောင်းမွန်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါကအရာရာကိုသိရန်လိုအပ်သည်။
သင်ဒီဆိုဒ်ကိုတည်ဆောက်စဉ်မှာ SEO အကြောင်းသင်လေ့လာခဲ့ပြီးဖြစ်သော်လည်းယခုခေတ်တွင်သင်လေ့လာခဲ့သောအရာအားလုံးကိုမှတ်မိရန်ခက်ခဲသည်။
သင်၏ site နှင့်“ ယောဘ၌” သင်ယူခဲ့သည့်အရာနှင့် ပတ်သက်၍ ဥပမာတစ်ခုသာဖြစ်သည်။
သင်သည်သင်၏ site ကိုမှပြောင်းရွှေ့လာသောအခါ
ဂူဂယ်လ်ပိုင်းခြားစိတ်ဖြာမှုနှင့် ၀ က်ဘ်စီမံကွပ်ကဲရေးကိရိယာများကိုတပ်ဆင်။ နားလည်ပါ။
၃၀၁ redirects ကိုသုံးပါ (သင့်တွင် .htaccess ဖိုင်ရှိ)
robots.txt ဖိုင်ကိုဖန်တီးပါ (သင့်မှာအသေးအဖွဲမဟုတ်ပါ၊ ပုံမှန်မဟုတ်ပါ)
ထပ်တလဲလဲအကြောင်းအရာများနှင့် Canonical နာမည်ပြissuesနာများရှောင်ကြဉ်ပါ
“ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းပညာ” စသည့်ဝေါဟာရများကိုသင်အလွန်ကောင်းမွန်စွာရေးသောကြောင့်သင် SEO ရေးသားခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အလွန်အမင်းသိထားသည်။
ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် SEO ၏ဤနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာရှုထောင့်များကို“ Best Practices” တွင်ထည့်သွင်းသရွေ့ကျွန်ုပ်လုံးဝသဘောတူသည်။
20:2009 pm တွင်ဇန်နဝါရီလ 11, 27
လေပြေ အမှန်စင်စစ်သင်သည်ငါ့ကိုကောင်းစွာသိ, Pat!
ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်ကို SEO အတွက်အတော်လေးနည်းနည်းပါးပါးတွန့်ဆုတ်နေသည်၊ သို့သော်အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သောအချက်သည်ကျွန်ုပ်ကိုအမှန်တကယ်ပစ်မှတ်ထားခြင်းမဟုတ်ပါ၊ ၎င်းသည်ပျမ်းမျှကုမ္ပဏီအားကွန်ယက်ပေါ်တွင်ပစ်မှတ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ ငါ geek တစ် ဦး နည်းနည်းကြောင့်ငါ tweak နှင့် tweak နှင့်အများအားဖြင့်ညှိ။
အမှန်အတိုင်းပြောရရင်၊ ငါဟာငါ့ရဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပိုကောင်းအောင်ပစ်မှတ်ထားပြီး၊ များစွာသောဘလော့ဂ်များကိုတည်ဆောက်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုငါဝန်ခံခဲ့သည် - ငါဟာပိုပြီးအာရုံစူးစိုက်မှုရရှိလိမ့်မယ်။ သက်ဆိုင်ရာအကြောင်းအရာ, မကြာခဏအကြောင်းအရာ ... အခါတိုင်းအနိုင်ရရှိ။
ဇန်နဝါရီ 21, 2009 မှာ 3: 55 AM
သငျသညျတဖနျခေါင်းပေါ်မှာလက်သည်း smack နှိပ်ပါ။ အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းနယ်ပယ်တွင်ပြtheနာပိုဆိုးလာသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်သူတို့၏ဝဘ်ဆိုက်နှင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုသူတို့ဗဟုသုတနည်းပါးသောကြောင့်၎င်းတို့သည်အကြောင်းအရာများကိုရေးသားရန်နှင့်ထည့်သွင်းရန်အတွက်ပင်အတိုင်ပင်ခံများအပေါ်မှီခိုရသည်။ သူတို့သည် web အတိုင်ပင်ခံများကိုကရုဏာသက်စွာဖြင့် SEO နှင့်တွန်းအားပေးခြင်းနှင့်အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများက ၀ ယ်သည်။ ထို့အပြင်၎င်းတို့အတွက်ဆိုဒ်များကိုတည်ဆောက်ပေးသောဤအတိုင်ပင်ခံအများစုသည်ထို site ၏အနုပညာကိုသာစိတ်ဝင်စားသောဒီဇိုင်နာများသာဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းသည်သူတို့ထင်မြင်ပုံနှင့်နားလည်မှုတို့ဖြစ်သည်။
21:2009 pm တွင်ဇန်နဝါရီလ 4, 54
Doug, သင့်လျော်သော, ဆွဲဆောင်မှုရှိသောအကြောင်းအရာများကိုရေးပါနှင့်သင်ရှာဖွေရေးအပေါ်စစ်တိုက်ခြင်းငှါအနိုင်ရ "သင်၏ကြေညာချက်ပိုက်ဆံပေါ်တွင်မှန်ကန်သည်။ ငါသင်ယူခဲ့ရသောသင်ခန်းစာ - သင်အသည်းအသန်စိတ်ဝင်စားနေသည့်ခေါင်းစဉ်တစ်ခုကိုရွေး။ မကြာခဏရေးပါ၊ အခြားသူများနှင့်ချိတ်ဆက်ပါ။ တစ်နှစ်ခန့်အကြာတွင်၎င်းသည်အလုပ်မလုပ်တော့ပါ။ ဟုတ်ကဲ့အိုးနှင့်ညှိထားသောဂဏန်းတွက်စက်သည်ကြီးမားသောအကူအညီဖြစ်ခဲ့သည်။ -Michael
ဇန်နဝါရီ 27, 2009 မှာ 8: 26 AM
၀ ဘ်ဆိုဒ်တစ်ခု၏အောင်မြင်မှုကိုအသိအမှတ်ပြုထားသော hetting တွင်အကြောင်းအရာနှင့် backlink များကြောင့်ဟုသင်ယူဆပါသည်။ သို့သော်၊ SEO ကျွမ်းကျင်သူများကိုသင်လုံးဝမဖယ်ရှားနိုင်ပါ။ သူတို့ကို SEO ကျွမ်းကျင်သူများလို့ခေါ်ကြတာက google ရဲ့ထိပ်ဆုံးအဆင့်သတ်မှတ်ချက်မှာသင့်ရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုဘာလုပ်ရမှန်းမသိမှန်းသူတို့သိတယ်။